Ny ekipanay - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Ekipa fanaraha-maso kalitao:
Ny vokatra dia hojeren'ny ekipan'ny fanaraha-maso kalitao miaraka amin'ny Quality Control Manuel, hahazoana antoka fa tsy hanana olana ireo vokatra manondraka rehetra.
Taorian'ny Sales Team:
Ity ekipa ity dia hikarakara serivisy aorian'ny varotra ho anao, hanome haingana antsipirihany vahaolana miaraka amin'ny lahatsoratra, sary na horonan-tsary ho an'ny fanontaniana na olana natrehinao izy ireo.
Ekipa mpivarotra matihanina:
Fanolorana hevitra sy toro-hevitra matihanina amin'ny mpanjifa, omeo angona teknika momba ny rafitra fanondrahana, horonantsary fampiharana rindran-drano mazava sy horonan-tsary fametrahana. Raha te hahalala ny vokatra fanondrahana rano manondraka na mitete ho an'ny vokatra na ny orinasanao.
Team Team Surport:
Ny fepetra takiana amin'ny rafitra fanondrahana rano, tsy maninona na lehibe izany na kely, ny ekipa teknikanay dia handinika ny fepetra takiana ary hanome valiny amin'ny antsipiriany ho an'ny mpanjifa.